फ्लोरिडा मा स्थित छ जो शहर, हाम्रो मोटर चालकहरुलाई एकदम परिचित नाम। केही समयको लागि हाम्रो सडक मा सफलतापूर्वक शेवरलेट ओर्लान्डो चल्छ। सबै समय को लागि उसलाई समीक्षा धेरै राम्रो छ। गरेको यो हाम्रो सडक लागि उपयुक्त छ कसरी राम्रो आफैलाई लागि पत्ता लगाउन प्रयास गरौं।
केही प्रयोगकर्ताहरू अनुसार, कार शेवरलेट ओर्लान्डो एक क्रसओभर छ। तर वास्तवमा यो मामला छ। पहिले, यो धेरै कोणीय, र बाटोमा आँखा छ दोश्रो, धेरै कठिन छ। शायद उहाँले psevdovnedorozhny शरीर किरा र पाङ्ग्रा कट्टर विस्तार छ शायद उहाँले 17 को एक पाङ्ग्रा आकार छ, तर एक एसयूवी को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणहरू यस कार अवशोषित छैन। कुनै प्रभावशाली जमीन अवकास, प्रसारण को भाग मा कुनै विकास - केही अर्डर गर्ने एसयूवी नजिक प्राप्त गर्न गरेको गरिएको छ। यो एक साधारण परिवार वैन छ। र को मुख्य लाभ को शेवरलेट ओर्लान्डो, समीक्षा मालिक यो यात्री खण्ड7सिट भन्छन्।
मुख्य लाभ को पनि शेवरलेट ओर्लान्डो को व्यावहारिकता र सान्त्वना ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ। चालक को समीक्षा सुविधा को तत्व अधिक, निर्माता राम्रो तरिकाले काम गरेको छ भनेर भन्न। को चालक सीट फरक विमानहरु मा समायोजित छ, को स्टीयरिंग स्तम्भ समायोज्य armrest र चालक लागि पनि धेरै सहज छ। यो नै armrest अन्तर्गत पन्जा बक्स, पर्दे द्वारा कवर छ जो छ। दुई कप धारकों पनि छन्। यसलाई त्यहाँ यस्तो आवश्यक युएसबी-पोर्ट, नेभिगेसन नक्सा नयाँ संस्करणका डाउनलोड गर्न एसडी-आगत छ जसमा पनि एक गोप्य बक्स उल्लेख लायक छ। बक्सिङ पनि चार्ज गर्दा आफ्नो फोन राख्न सिद्ध छ। सिद्धान्त, यो सबैको व्यापार छ। स्पिकरहरूमा संगीत को ध्वनि पनि तपाईं शेवरलेट ओर्लान्डोमा संगीत ठीक गर्न अनुमति दिन्छ। यो वर्ग आफ्नो वाहन को सुविधाहरू राम्रो हो। को iPhone उपकरण जस्तै मा-बोर्ड सिस्टम राम्रो छ संग आइपड वा iPad समिकरण छ।
निलम्बन शेवरलेट ओर्लान्डो, समीक्षा भन्न, व्यस्त मिसिन लागि डिजाइन गरिएको छ र यसैले, यो अवस्थामा यसलाई एकदम बिस्तारै रहेको छ। तपाईंले खाली कार मा ड्राइव भने, यो धेरै सहज, किनभने यो मामला निलम्बन कडा छ। अमेरिकी केही impressively कुरा, valkost वा precariousness सबै छ। कार को आयाम पर्याप्त अर्धव्यास खोल्दै सानो, तर ठूला छन्।
बक्स ओर्लान्डो स्वचालित प्रसारण 6-गति र पर्याप्त सजिलै देखिने स्विच। कार पनि 140 घोडाहरू briskly बढाउने र तीन overtaking बनाउन अनुमति छैन, धेरै छिटो छैन।
आधार कार अगाडि ढोका, immobilizer र crankcase सुरक्षा मा 16 इन्च पाङ्ग्राहरू, कपडा धुलाइ, ABS, सी डी-खेलाडी, बिजुली Windows को पूर्ण सेट संग सुसज्जित छ।
विकल्प पछिल्लो ढोका, छाला स्टेरिड़, रेडियो-नियन्त्रण, विरोधी-चोरी प्रणाली, 6-airbags, ESP मा Windows द्वारा complemented lt। लागत 40 हजार बढी प्रसन्न हुनुहुन्छ।
यो एउटा पूर्ण सेट LT + 16 इन्च पाङ्ग्राहरू, जलवायु नियन्त्रण, ब्लुटुथ, साथै यूएसबी संग एक रेडियो स्थापना जो पछि छ।
को LTZ अन्तिम संस्करण 17 इन्च मिश्र धातु पाङ्ग्राहरू, क्रूज नियन्त्रण, तह सुसज्जित छ पछाडिको-दृश्य दर्पण, उज्यालो केन्द्र कन्सोल वर्षा सेन्सर, पछिल्लो , पार्किङ सेन्सर स्वतः रोशनी मा स्विच। छाला भित्री आफूलाई इच्छा गर्नेहरूलाई, 40 हजार rubles बाहिर खोल छ, र नेभिगेसन 20000।
को शेवरलेट ओरलैंडो - उठयो छैन जो सक्छ VW Tuareg, सबै भन्दा राम्रो विकल्प मान्छे को परिवार को लागि। समीक्षा कार पूर्ण यसको पैसा पूरा भन्छन्। पूर्ण भित्री राम्रो ड्राइभिङ प्रदर्शन, विकल्पहरू धेरै, उचित मूल्य - सबै मुख्य लाभ भ्यान, एक क्रसओभर, कार संग जम्मा छ जो छ।
साईट चालकहरुको लागि कार एडप्टर। सामान्य र प्राविधिक वाहन उपकरण
के ताल बरफ थियो? बरफ मा लडाई: मिति, वर्णन, स्मारक
ल्यापटप एसस X52J: विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा
Arthralgia रोग - यो के हो र यो कसरी उपचार गरिन्छ?
व्लादिमीर Evgenevich Fortov, विज्ञान को रूसी एकेडेमी अध्यक्ष: जीवनी, वैज्ञानिक गतिविधि
Kolka हिमनदी, Karmadon घाटी, उत्तर Ossetia गणतन्त्र। को हिमनदी को विवरण। 2002 मा विनाश